—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီး ပျောက်သွားပေမယ့် သွေးပြစ်လာတဲ့အကြောင်းလေး သိချင်လို့ပါ ဆရာ။ သွေးပြစ်တာက ဘယ်အချိန်ဆိုရင် ပြန်ကောင်းနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ A. သွေးပြစ်တယ်ဆိုတာ ဆေးပညာအရ ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာ သေချာမသိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ သွေးပြစ်တယ်ဆိုတာ...
COVID-19 ကာကွယ်ဖို့ ဘာကြောင့် PPE ဝတ်ကြတာလဲ၊ မျက်စိ၊ နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်ကို ကာကွယ်ရင် မပြီးဘူးလား
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ၊—– ကိုဗစ်လူနာတွေကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက ကူးစက်နိုင်ခြေ သိပ်များပါတယ်။ အမှုန်အမွှားက ကူးစက်တယ်။ သေဆုံးမှု (၃) ရာခိုင်နှုန်း ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် လူနာနဲ့ထိတွေ့မယ်လူမှန်သမျှက PPE (Personal Protective Equipment)...
ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးသူတွေက ပိုးပြန်ဝင်နိုင်ခြေ (Reinfection) ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ၊—– Q. ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးသူတွေက ပိုးပြန်ဝင်နိုင်ခြေ (Reinfection) ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ ဆရာ။ A. ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးသူတွေမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် သူရဲ ့ကိုယ်ခံအားစနစ်က ငါးလအထိ ခံနိုင်တယ်ဆိုပြီး လေ့လာမှုတစ်ခုက ဆိုထားပါတယ်။ ဒီငါးလအတွင်း...
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်(အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည် ၊—– Q. ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးသူတွေမှာ ဘယ်လိုနောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေးဝေဒနာတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလဲ ဆရာ။ A. ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့သူ လူငယ်အများစုက လျင်လျင်မြန်မြန် ပြန်ကောင်းကြတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်မှု နည်းပါးတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြေခံရောဂါရှိသူတွေနဲ့ သက်ကြီးပိုင်းအရွယ်မှာတော့ ကိုဗစ်ပျောက်ပြီး...
ကွမ်းစားခြင်းဖြင့် ကိုဗစ်ရောဂါကို မကာကွယ်နိုင်ရုံတင်မက ပိုမိုကူးစက်နိုင်ဟုဆို
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကွမ်းစားခြင်းဖြင့် ကိုဗစ်ပိုးကို မကာကွယ်နိုင်ရုံတင်မက ကိုဗစ်ရောဂါ ပိုမိုကူးစက်နိုင်ကြောင်း ကိုဗစ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ အမေးအဖြေအစီအစဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း (ဗဟို) ဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခဒေါက်တာဦးထင်အောင်စောက အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။ “ကွမ်းယာစားတဲ့အခါ ပါတဲ့ထုံးတွေက...